Google's Imba uye Nest zvishandiso havasi vatauri chete vakavakirwa-muGoogle Kutsvaga. Vanokutendera iwe kudzora inoenderana smart dzimba, cue kumusoro firimu paTV yako, chinja desktop yako maspika, uye zvimwe zvakawanda.
Kuti uwane zvakanyanya kubva zvako Imba yeGoogle, Imba Mini, Nest Mini, Kumba Max, Nest Hub kana Nest Hub Max, isu takamisikidza sarudzo yemazano epamusoro uye matipi ekukubatsira kugona matauri-akaomeswa maspika uye ekuratidzira pasina nguva.
Pane mashoma-akanangana nedhizaini pazasi peichi chiitiko, nepo mamwe ma tricks akapatsanurwa kuita matipi akajairwa, matipi ezvekuvaraidza, ruzivo ruzivo uye matipi ekudzora epamba
Google Batsirai Matipi mazano uye manomano
Google Assistant mubatsiri weGoogle wega, senge Amazon's Alexa uye Siri yaApple. Kutaurirana kuti iwe ugone kubvunza mubvunzo uye yekutevera mibvunzo, uye Mubatsiri anozoteedzera nhaurwa, kuona mamiriro, uye kunzwika kupindura neruzivo rwakakodzera.
Google Mubatsiri chiitiko chekunze muGoogle Home mutauri mutsara-kumusoro. Unogona kuishandisa kudzora zvishandiso zveGoogle Home, Pixel zvishandiso, pamwe neyechitatu-bato masevhisi uye zvishandiso.
Kuti ikubatsire kuona zvese zvinogona kuitwa neMubatsiri, isu takarongedza mamwe matipi ehungamiro nemateki, iyo iwe yaunowana pano. Nekudaro, kana iwe uchida kudzidza matipi uye matangi akasarudzika, akasarudzika kana akananga kuGoogle Home neGoogle Nest zvishandiso, verenga.
Google Home general mazano uye manomano
Rangarira kushandisa izwi rekumuka
Google Assistant anopindura kune maviri 'wake mazwi': "Ok Google" uye "Hei Google". Nehurombo, haugone kuchichinja kubva pamitsara miviri iyi parizvino. Iwe unofanirwa kutaura imwe nguva imwe neimwe yaunoda kuita neGoogle Kumba mudziyo zvakare (taura mutsara, uchiteverwa nemubvunzo kana kuraira).
Midziyo yeGoogle Imba inotsigira Inoenderera Nhaurirano saka haufanire kutaura mazwi ekumutsa emubvunzo wekutevera asi uchafanira kuvhura Kuenderera Nhaurirano.
Wedzera nhengo yeImba
Google Home inotsigira vanosvika vashandisi vashanu, vese vanozogona kudzora chero michina yakabatana neImba yako, pamwe nekudzidzisa Google kuziva izwi ravo pachiitiko chemunhu kana zvasvika kumakarenda uye basa rinotanga, semuenzaniso.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Wedzera icon> Tapira pa Wedzera Wemba Nhengo> Nyora zita kana email kero yemunhu waunoda kuwedzera> Simbisa.
Bvisa nhengo Yemba
Kana iwe uchida kuona kuti ndiani anokwanisa kuwana zvishandiso zveGoogle Kumba yako, tinya pazasi pezviratidziro muTebhu tende yeGoogle Home app uye tinya pasi peChengetero.
Chinyorwa cheNhengo dzeKumba chichaonekwa pano. Tinya madota matatu kurudyi kwezita ravo wobva warova 'bvisa' kana iwe uchida kudzosera mukana. Iwe unogona zvakare kuwedzera Nhengo yeKumba pano zvakare nekukanda pa "+" kumusoro kwekurudyi kweiyo Mhuri Nhengo skrini.
Ungachinja sei zita rako reNick
Paunogadzira chishandiso chitsva cheGoogle Kumba, iwe unozofanirwa kugadzira "Kumba" kuti uise mukati. Izvi zvinokutendera kuti uwedzere zvimwe zvishandiso kune imwe imba, kana imba nyowani, uchitumidza Imba yega yega yaunogadzira. zviite kuti zvive nyore kusiyanisa pakati pekuwedzera pazviri.
Kuti uchinje zita reimwe yeDzimba dzako> Vhura iyo Google Kumba app> Tinya pane Kumba tebhu muzasi kuruboshwe> Tinya pane zvigadziriso cog pasi pezita repamba raunoda kuchinja> Dzvanya paNickname Yepamba> Chinja zita > Sevha.
Gadzira boka remutauri
Kune avo vane rombo rakanaka kuti vanaro zvishandiso zvakawanda zveGoogle Kumba, unogona kugadzira boka remutauri nezvose, kana zvakasarudzwa zvishandiso zveKumba. Iwe unogona ipapo kubvunza Google Mubatsiri kuti aridze mimhanzi kubva kune iwo maspika uye zvinokwanisika kutumidza chero mapoka zvakare.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Wedzera icon> Dzvanya paGadzira Mutauri Boka> Sarudza iyo Google Kumba zvishandiso zvaunoda kuita yako boka> Tumidza zita Boka> Chengetedza.
Maitiro ekusefa zvemukati
Haasi ese maratidziro akakodzera mazera ese uye seGoogle Home zvishandiso zvine simba reGoogle Tsvaga kumashure kwavo, ungangoda kusefa zvemukati kuti uve nechokwadi chekuti chero vevanhu vadiki mumba mako havaone kana kunzwa zvinhu zvausinga vanoda ivo.
Iwe unogona kuseta mafirita emumhanzi, mavhidhiyo uye maficha anowanikwa kuburikidza neMubatsiri. Izvo zvakare zvinokwanisika kusarudza zvishandiso iwe zvaunoda kusefa uye wozoisa mafirita, saka haufanirwe kusefa iyo Mini Mini kana kuti Nest Mini muhofisi yako yakavharwa, semuenzaniso.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Zvirongwa> Dhijitari Wellbeing> Tevedzera yekumisikidza mirairo
Ronga nguva yekumberi
Kune avo vanoda nguva kubva paGoogle Mubatsiri, unogona kuronga nguva yekuzorora. Izvo zvakare zvinokwanisika kudzima mama maikorofoni pane ese eGoogle Home zvishandiso kuti iwe ugone kushandisa iyo sarudzo futi.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Zvirongwa> Dhijitari Wellbeing> Tevedzera iyo yekuraira yekumisikidza yekuzorora kuronga.
Ipa yako Google Home mudziyo zita idzva
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Google Kumba mudziyo waunoda kutumidza zita> Dzvanya iyo Zvirongwa cog mukona yekurudyi kona> Dzvanya pazita uye uchinje icho kune chaunoda .
Ronga yako email ziviso
Kana iwe ukapinda, Google ichakutumira email kuti ikuchengete patsva pamusoro peChromecast, Google Home neNest zvishandiso uye Google Assistant. Iko kune matipi uye manomano, maitiro matsva, kupa uye vanobatana.
Kugona kuzivisa nezveemail, vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rwechidzitiro> Tapira paSystem> Notifications> General Notifications> Gadziridza zvaunofarira.
Wona yako Tsvaga uye Tarisa Nhoroondo
Kuti utarise yako yekutsvaga uye yekuona nhoroondo, vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya pane iyo icon icon mukona yekurudyi yekona yechidzitiro> Tapira pane Zvangu Zvekuita.
Webhusaiti ichavhura nezvose zvese Google Midziyo midziyo (uye Mubatsiri pafoni yako) yakarekodha. Unogona kudhirowa nezuva uye nenguva, tamba chaizvo zvakanzwikwa Imboo zvekushandisa, utore ruzivo, uye udzimise.
Shandisa iyo Google ecosystem
Kuti uwane zvakanakisa kubva paGoogle Imba, uchishandisa zvimwe zvigadzirwa zveGoogle zvinopa chiitiko chakanakisa. Midzi neNest zvishandiso zvakagadzirirwa kushanda nezvigadzirwa vanhu vazhinji zvavanoshandisa kazhinji, senge Google Calendar uye Gmail.
Kana zvasanganiswa neGoogle Kumba, iwe unogona kuita Mubatsiri mubatsiri wechokwadi wezve munhu. Inogona kutarisa marongero ako, isa zviyeuchidzo, kuwedzera zvinhu kumagetsi ako ekutenga, nezvimwe, zvese zvine chirairo cheizwi chisingaperi. Ichatodhonza pekugadza uye nendege zvawanikwa kubva kune yako email semuenzaniso.
Google Home ndeye Google.com. Unoda kutsvaga supamaketi yako yepedyo? Unoda kushandura ounces kune makapu? Tiri kuziva kuti Teresa May kana Donald Trump vane makore mangani? Wati wamboshamisika here iro iro guta guru reIndia? Google Kumba uye Nest zvishandiso zvinogona kuve mubatsiri wako uye kumisikidza kugadzwa, asi zvakare zvakapetwa kaviri sekutsvaga injini.
Rangarira iwe unogona zvakare kubvunza yekutevera-mibvunzo. Google Mubatsiri anogara achirangarira musoro wenyaya kana chirahwe mumutsara wako wemibvunzo uye unogona kubvunza mibvunzo yekutevera usingati "Ok Google" pamberi peumwe neumwe kana iwe ukavhura "Kuenderera Nhaurirano" - sezvatataura pamusoro apa.
Maitiro ekuvhura kana kudzima Kuenderera mberi Kukurukurirana
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweapp> Dzvanya pane Zvirongwa> Bhura pasi kuti 'Zvimwe Zvirongwa'> Vimba pane Mubatsiri tebhu pasi pezita rako uye email kumusoro kwechiso> Bhura pasi kuenderera mberi Nhaurirano> Chinja Kuenderera Nhaurirano kuvhura kana kudzima.
Maitiro ekumisikidza Guest Mode yezvako Google Home zvishandiso
Unogona kumisikidza nzira yevaenzi yekurega chero munhu achibatanidza kune yako Google Home zvishandiso kana vangoisa mana-manhamba ePin yakapihwa neGoogle Home app, pasina iwo anoda kuva kune yako yeWi-Fi network. Unogona kubatidza kana kuvhara muenzi wega wega waunayo.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Google Kumba mudziyo waunoda kuseta muenzi modhi kumusoro> Vimba pane Zvirongwa cog kumusoro kurudyi> Bhura pasi kusvika kuGuest Mode> Toggle Guest Mode kuti utarise PIN iri pazasi.
Vaenzi vanozoda kuve neGoogle Home app uye vaise iPin yakaratidzwa painenge yakumbirwa.
Gadza alarm kana timer
Google Midziyo midziyo inogona kutsiva yako alarm wachi uye ivo vanotsigirawo timer mabasa.
Iti "OK Google, seta timer kwemaminitsi mashanu" kana "Ok Google, seta alarm ye7AM" uye uchawana rwiyo rwakanaka kana iyo timer yakwana kana kuti inguva yekumuka. Kudzima alarm kana timer, iwe unongofanirwa kuti "Mira" - hapana chikonzero chekutaura mazwi ekumuka kutanga.
Maitiro ekuwedzera imba uye kero yebasa kune mamwe maitiro etsika
Kuwedzera kero dzekumba nedzemubasa kuchabvumidza zvishandiso zveGoogle Kumba kupa akawanda mhinduro dzakasarudzika, kusanganisira mamiriro ekunze uye nguva dzekufamba mangwanani. Kana iwe usina kumiseta izvi pawakatanga kumisikidza yako Google Kumba mudziyo, iwe unogona achiri kuzviita mushure.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Zvirongwa icon> Tsvaga pasi ku 'Zvimwe Zvirongwa'> Tapira pane 'Yako Info' tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email> Tinya pane 'Kwako Nzvimbo'> Wedzera kero yekumba / Wedzera kero yebasa.
Maitiro ekuwedzera ruzivo rwekubhadhara
Kuwedzera ruzivo rwekubhadhara kunotendera iwe kushandisa Google Mubatsiri kuraira tekisi kana kuenda, semuenzaniso. Kune akasiyana siyana maringe kukubvumidza iwe kuve nechokwadi chako chiziviso chinosimbiswa usati wabhadhara semuenzaniso.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Tinya pane Yako Info tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email> Kubhadhara> Wedzera ruzivo rwekubhadhara, Kero yekutumira uye sarudza marongero ekutenga ekutenga
Ungachinja sei zvinodaidzwa newe Google Mubatsiri
Unoda Google Mubatsiri kukudaidza iwe ishe, murume kana murume akanaka kupfuura vese? Hapana dambudziko.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tapira paZvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Tapira pane Yako Info tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email> Nickname> Chinja zvaunoda Mubatsiri wekukufonera. Unogona kunyange kutarisa kuti rinodudza icho zvakanaka uye kana zvisiri, unogona kuchiperetera kunze.
Ungachinja sei tembiricha yekushisa
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tapira paMagadziriso> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Tapira pane Yako Info tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email> Mamiriro ekunze> Sarudza Fahrenheit kana Celsius .
Ungadzidzisa sei Google Mubatsiri kuziva izwi rako
Kudzidzisa Google Mubatsiri kuziva izwi rako kunokupa iwe chiitiko chakasarudzika. Ichakwidza karenda yako semuenzaniso, kana mangwanani ako kuenda, panzvimbo pevamwe vako. Izvo zvakakosha kuti utore dzimwe nhengo dzeKumba kuti dzimise Voice Match futi kuitira kuti zvishandiso zveKumba zviunze chakanakisa chiitiko kwese kwese.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tapira paMagadziriso> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Tinya pane Mubatsiri tebhu kumusoro pasi pezita rako neemail> Voice Match> Tevedza rairo. Kana iwe uine Nest Hub Max, iwe unogona zvakare kuitisa Face Match, iyo inogara pasi payo pasi peiyo Voice mechi kurongedza.
Kune avo vane akawanda Midzi yemidziyo michina, iwe unofanirwa kungoda kune Voice Match kamwechete. Zvimwe zvinoshandiswa zvinodhonza iro ruzivo kuburikidza.
Ungachinja sei kalenda yako yekusarudzika
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tapira pane Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Dzvanya paSevhisi tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email> Karenda> Default Makarenda.
Kubva pano, iwe unogona kusarudza iyo khalenda yaunoda kushandisa kuti ugadzire zviitiko.
Maitiro ekumisikidza kudana kwenzwi kuGoogle Home zvishandiso
Unogona kuwana Google Mubatsiri kuita mafoni pane ako eGoogle zvishandiso, asi mafoni kune emergency mabasa haawanikwe kune vese vanopa.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tapira pane Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Tapira paTabhenakeri tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email> Izwi neVhidhiyo Mafoni> Tevedzera iyo mirayiridzo.
Chinzwa nezvezuva rako
Google Midziyo midziyo inogona kukuudza nezvezuva rako, sengenda yako, mangwanani traffic traffic, mamiriro ekunze, uye chero zviyeuchidzo. Iwe unogona zvakare kugadzirisa yako mushumo kusabvisa zvimwe zvinhu, semamiriro ekunze. Chirevo ichi chichipedzisa nenyaya yenhau.
Zvese zvaunofanirwa kuita kana uchinge wamisa karenda zvaunofarira uye akawedzera kero, nezvimwe, zvinoti "Ok Google, ndiudze nezve zuva rangu".
Ronga mhuri yekutenga zvinyorwa
Iwe unogona otomatiki kuwedzera zvinhu kune yako yekutenga zvinyorwa neGoogle Imba neNest zvishandiso, kungave panyama kana kushandisa izwi rako. Semuenzaniso: "Ok Google, wedzera kofi pane yangu yekutenga zvinyorwa". Nyora yacho ichaonekwa muGoogle Home app, uye inogona kuwedzerwa nekukanda "Wedzera Chinhu" pachikwangwani Chokutenga Chinyorwa.
Kuti uone nekugadzirisa yako yekutenga runyorwa, vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba tebhu muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Tapira paSevhisi tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email. > Rondedzero Yekutenga.
Rondedzero yekutenga inogona kungobatanidzwa neyemusoro account inobata asi iwe unogona kuwedzera vanobatana kuitira kuti ivo vagone kuikwanawo. Ingo tora chiratidzo chiri kumusoro kurudyi kweiyo Shopping Shopping screen kugovera yako yekutenga zvinyorwa.
Tsvaga foni yako uchishandisa yako Kumba mudziyo
Hausi kuwana foni yako here? Midziyo yeGoogle Kumba inokwanisa kutsvaga chako asi iwe uchafanirwa kuchisanganisa neshumiro inonzi IFTTT. Iwe unozofanirwa kusaina kune yemahara IFTTT account, mushure meizvozvo kana iwe shandisa iyi yekubheka kana applet sekudanwa kwavanoitwa, unogona kufona nhamba yako kubva paGoogle Home mudziyo paunoti "Ok Google, tsvaga foni yangu".
Gadza chirongwa kana maitiro
Izvo zvinokwanisika kuwana Google Mubatsiri kuti aite zvinhu zvakawanda nemirairo imwe chete. Semuenzaniso, "Ok Google, nguva yekurara" kana "Ok Google, husiku hwakanaka" inogona kukuudza mamiriro ekunze ezuva rinotevera, bvunza kuti inguvai yekumisikidza aramu yako, gadzirisa mwenje, mapuregi nezvimwe, pamwe nekukiya masuo ako (kana uine zvishandiso zvinoenderana).
Kuti ugadzire maitiro, vhura iyo Google Kumba app> tinya paImba yepamba muzasi kuruboshwe> Dzvanya paZvirongwa> Bhura pasi kune Zvimwe Zvirongwa> Dzvanya pane Mubatsiri tebhu pasi pezita rako uye email> Dzvanya paRoutines> Sarudza imwe yeiyo miitiro uye chipa / svinura mabhokisi mukati maro.
Paunenge uchinge wagadzirisa maitiro, chiratidzo cheRoutines chichaonekwa paImba skrini yeGoogle Home app. Iwe unozobva wakwanisa kuwana ako maitiro zviri nyore uye nekugadzirisa iwo.
Google Home varaidzo mazano uye manomano
Wedzera sevhisi yemimhanzi kuimba yako yeGoogle Kumba
Google Home inogona kuridza mimhanzi kubva kune akati wandei, senge Google Play Music, Spotify, Deezer, kana YouTube Music. Zvisingashamisi, hazvishande neAmazon Music.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kweiyo Google Kumba app> Dzvanya pane "Wedzera" icon kumusoro> Dzvanya paMumhanzi neAudio pasi pechikamu cheAdd Services> Sarudza kubva pane chinyorwa uye uteedzere mirayiridzo.
Kuti ugadzire chako sosi sosi, tungamira kuImba tebhu yeGoogle Kumba app> Dzvanya paMagadziriso> Tsvaga pasi kune Zvimwe Zvirongwa> Dzvanya paSevhisi tebhu> Tapira Mumhanzi> Sarudza sevhisi yakabatana yaunoda kushandisa seyakanyanya sosi yemumhanzi. .
Wedzera vhidhiyo sevhisi kuGoogle kumba kwako
Google Midziyo midziyo inoshandawo nemhando dzakasiyana vhidhiyo masevhisi, kusanganisira YouTube, Netflix, BBC iPlayer uye All4.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kweiyo Google Imba app> Dzvanya pane Wedzera icon kumusoro> Dzvanya paVhidhiyo uye Mifananidzo pasi peAdd Services chikamu> Sarudza kubva pane chinyorwa uye uteedzere mirairo.
Kanda mafirimu, mafirimu uye odhiyoti kuTV
Kana uine Google Chromecast, unogona kukumbira zvishandiso zveGoogle Kumba kutamba mafirimu eNetflix, TV show kana YouTube mavhidhiyo paTV yako. Ehezve, kana iwe uine iyo Nest Hub kana Nest Hub Max, iwe uchave unokwanisa kutamba mamwe eaya masevhisi pane iyo Hub's skrini pachayo futi kunyangwe kana iwo maonesheni ari madiki zvakanyanya.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kurudyi kweapp> Tapira pane Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Dzvanya paSevhisi tebhu pasi pezita rako uye email kumusoro kwechiso> Enda kuTV uye vatauri> Dzvanya chikwangwani "+" mukona yepazasi rekona yechiso. Iyo Google Home app ichatsvaga maTV-anotsigirwa maTV pane imwecheteyo Wi-Fi network seGoogle Imba yako.
Iwe unofanirwa kubatanidza yechitatu-bato masevhisi, seNetflix, kuakaundi yako yeGoogle uchishandisa Google Home app. Mushure mekuita izvi, unogona kungotaura zvinhu zvakaita sekuti "Ok Google, tamba Imba Yemota kubva kuNetflix paTV". Iwe unogona zvakare zvakare Google Imba kumbomira kutamba kana kudzorera kumashure kweminiti kune chimwe chinhu chaungave wakarasikirwa nacho.
Kanda mafoto kuTV yako
Imba yeGoogle haigone kungodzora Netflix kana YouTube paTV yako, inogona zvakare kudzora Google Photos, Google yemahara gore rekuchengetedza foto sevhisi.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweapp> Dzvanya pane Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Dzvanya paSevhisi tebhu pasi pezita rako uye email kumusoro kwechiso> Tapira paVhidhiyo uye Mifananidzo> Chinja kana kudzima Mapikicha eGoogle.
Kana imwe account yako yabatanidzwa, unogona kutaura zvinhu zvakaita sekuti "Ok Google, ndiratidze mafoto emhuka dzangu dzinovaraidza paTV". Iyo sevhisi inokwanisa kumaka uye kuziva vanhu, zvinhu, nenzvimbo, saka inokwanisa kungwara kushandira chero chaunokumbira.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuti unzwe podcasts kubvunza. Iti "Ok Google, Tamba Hupenyu Huno hweAmerica" ​​kuti unzwe chikamu chazvino kwazvo chechiratidziro. Kana iwe uchifanira kumbomira, nguva inotevera paunobvunza iyo podcast, yako Google Kumba kifaa chinotora kwawakasiya.
Chinja mataurirekodhi ako neKhaya
Google Cast yakavakirwa zvakananga mubrowser yeGoogle. Saka, iwe paunodzvanya bhatani rekukanda mukona yeCh Chrome, unogona kutsvaga yako Midziyo svinu (s), woisarudza, wozokanda odhiyo kubva pakombuta yako kuenda kune yako Google Mudziyo mudziyo.
Google Home ruzivo matipi uye manomano
Maitiro ekutevera masheya uye isa stock zvido
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kweiyo Google Kumba app> Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Dzvanya paSevhisi pombi kumusoro pasi pezita rako uye email> Tapira Pamasheya.
Iwe unogona kuwedzera ako aunoda masheya kune yekutarisa runyorwa kuti uwane nekukurumidza kwavari. Kune bhawa rekutsvaga kumusoro kana iwe uchiziva zvauri kutsvaga, pamwe nemusika wemuno uye epasi musika tabo, ese ari maviri anopa mazano.
Ungachinja sei nhau dzako
Iti "Ok Google, teerera kune nhau" uye zvishandiso zvako zveGoogle Home zvinodzora nhau kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iwe unogona kushandura izvo zvitubu zvaunoda kuti nhau dziuye kubva, pamwe neodha.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kweiyo Google Kumba app> Tapira pane Zvirongwa> Bhura pasi kusvika kune Zvimwe Zvirongwa> Dzvanya paSevhisi pombi kumusoro pasi pezita rako uye email> Tinya pane Nhau.
Kuwedzera sosi yenhau, tinya iyo "+ Wedzera Nhau Sosi" pazasi pechinyorwa. Kuti uchinje odha yacho, sarudza "Chinja Order" pamusoro pechinyorwa. Kuti ubvise sosi, tinya iyo "X" kurudyi kwesosi.
Google Home Smart Home Dzinodzora matipi uye manhamba
Google Home inogona kudzora internet-yakabatana midziyo yakakomberedza imba yako, kusanganisira lightbulbs kubva Philips Hue, Hive uye Ikea, kamera kubva dendere uye Netatmo, plugs kubva kuTP-link uye Wemo, thermostats kubva kuNest, Honeywell, Tado uye mukoko, nezvimwe zvakawanda.
Iwe haugone kungodzima zvishandiso uye kudzima uchishandisa izwi rako kana Google Home app, asi iwe unogona zvakare kupatsanura zvishandiso nekamuri uye kudzora zvese kubva kuImba app, uchiita smart imba kudzora super yakapusa. Iwe unogona zvakare kuwedzera IFTTT mapepa kuti uwane zvakanyanyisa kubva Kumba nemidziyo yako, asi izvo hazvidiwe.
Maitiro ekuwedzera matatu echitatu-smart midziyo yemumba
Google Home inovimba neyechitatu-bato masevhisi kuti ikupe iwe ruzivo rwakanyanya, kunyanya kana zvasvika kune smart home control. Kune nhamba huru ye inopindirana smart zvishandiso pamba uye rondedzero iri kuramba ichikura. Kana iwe uchitova neakachenjera epamba zvishandiso zvekumusha, kana iwe uchida kuziva kana chishandiso chauri kutsvaga kutenga chinoenderana:
Dzvanya paTabhu tab muzasi kuruboshwe kweiyo Google Kumba app> Dzvanya pane Wedzera icon kumusoro> Tapira paSeta Dhizaini pasi pe Wedzera kuImba chikamu kumusoro> Sarudza iyo "Iva nechimwe chinhu chakamisikidzwa" sarudzo pasi Inoshanda neGoogle> Tsvaga mugadziri wechigadzirwa chako uye uteedzere rairo.
Wedzera mudziyo mukamuri mukati meimba yako
Paunenge iwe uchinge wamisikidza wechitatu bato smart imba chishandiso, ichaonekwa pazasi peKumba tab mune yeGoogle Kumba app. Pachave ne "Wedzera kuKamuri" icon yaunogona kubaya kuisa smart smart imba mukamuri mukati meKumba kwako asi kana iyo icon isingaoneke:
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe> Dzvanya pane iyo kamuri iwe yaunoda kuwedzera yako nyowani kifaa ku> Dzvanya pane Zvirongwa cog kumusoro kumusoro kurudyi> Dzvanya pa Sarudza Midziyo> Sarudza chishandiso chaunoda wedzera kuimba iyoyo> Inotevera.
Iwe unogona zvakare kuwana rondedzero yemidziyo yako uye kwavari ivo kuburikidza neImba yepamba muzasi kuruboshwe rweImba app> Zvirongwa> Zvimwe Zvirongwa> Mubatsiri tebhu kumusoro pasi pezita rako uye email> Kumba Kudzora.
Chinja mukamuri mudziyo urimo
Unogona kutamisa Nest Hub yako kubva kukicheni yako kuenda kuimba yako yekurara, kana yako smart plug kubva kuhofisi yako kuenda kuimba yako yekutandarira, semuenzaniso. Kuisa zvishandiso mumakamuri mukati meImba yako zvinoita kuti zvive nyore kudzora. Semuenzaniso, unogona kubva wati "Ok Google, dzima mwenje wemba yekutandarira" uye mwenje yese yakabatana neimba yekutandarira ichadzima.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe> Dzvanya pane chishandiso chaunoda kufambisa> Dzvanya paRoom> Sarudza Kamuri> Sevha.
Ipa zita rekuti imba yakangwara
Kutumidza zita mudziyo kunoita kuti zvive nyore kudzora kuburikidza neGoogle Mubatsiri. Semuenzaniso, unogona kutumidza smart plug kudzora mwenje mumba mako yekutandarira kuenda ku "Living Lamp" pane kuti izonzi "TP-Link Smart Plug 45688", zvichikubvumidza iwe kuti ubvunze Google kubatidza kana kudzima mwenje wemba yekutandarira. , pane kuti urangarire zita racho.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe> Dzvanya pane chishandiso chaunoda kutumidza zita> Dzvanya pane Zvirongwa cog kumusoro kurudyi> Dzvanya paZita> Sarudza zita> Sevha.
Google Home dhigirii matipi uye manomano
Dzoserai Kumba kweGoogle
Kuita fekitori reset uye kudzoreredza yako YeGoogle imba mune yakanaka-se-nyowani nzvimbo, bata maikorofoni bhatani kwemasekondi gumi nemashanu. Kubva ipapo, iwe unogona kuiisa kune imwe Google account account uchishandisa Google Home app.
Reboot Google Kumba
Chii chaunoita kana imwe gadget ikamira kushanda? Unoitangazve, kana "kuitazve". Google yakaisa izvi muImba yeApp uye inoshanda kune ese maGoogle Home zvishandiso.
Vhura iyo Home app> Sarudza iyo Yekumba tebhu muzasi kuruboshwe rwechidzitiro chako> Sarudza izvo Zvekushandisa zvishandiso zvaunoda kudzorerazve> Dzvanya iyo Zvirongwa cog kumusoro kumusoro kurudyi> Tinya pamatombo matatu kumusoro kumusoro kurudyi> Reboot.
Bata nzira yako kuburikidza nezvinhu
Kunze kwezwi rako, unogona kudzora Google Kumba nekubata kwako. Tinya pamusoro wepamusoro wekutaura kamwechete kuti umumutse yako Google Home kana kumbomira uye kuridza nhepfenyuro. Iwe unogonesawo kutsikisa munwe wako padenderedzwa rakakomberedza kumusoro kuti uchinje huwandu.
Kana iwe uchida kumisa Google Kumba kubva "kugara-uchiteerera", tsvaga bhatani riri kumashure kwespika. Ndiyo chete bhatani, uye ine maikorofoni pairi. Dhinda iyo uye Imba ichadzima maikorofoni (mwenje ina yemwenje ichabaka kumusoro). Dhinda zvakare, uye ichakuudza kuti maikorofoni iripo.
Kana yavepo, Google Imba iri mune inogara-inoteerera modhi uye ichateerera uye kupindura kumirairo yako.
Ongororo yeGoogle Pamba
Google Nest Hub uye Nest Hub Max matipi uye mazano
Maitiro ekusetazve Nest Hub uye Nest Hub Max
Dzvanya uye bata vhoriyamu kumusoro uye vhoriyamu pasi mabhatani kumashure kweNest Hub kana Nest Hub Max panguva imwe chete kwemasekondi gumi kuti udzorere mudziyo. Ramba uchivabata kusvikira mudziyo wagadzirwazve. Mharidzo yambiro ichaonekwa isati yasvika.
Rongedza kuratidzwa kuti kuwirirane nemba yako
Google Nest Hub uye Nest Hub Max vanoratidzira uye mutauri. Iyo yekuratidzira inogona kugadziridzwa munzira dzakasiyana siyana kuti ikwanise kusanganisa munzvimbo dzayo zviri nani, kubva pakusarudza kana yakaderera mwenje modhi inogoneswa kumisikidza hushoma kupenya. Iwe unogona kunyange kuseta iyo Nest Hub uye Nest Hub Max kuratidza kuti vagadzirise vara ravo kuti rienzane nharaunda yavo.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane yako Hub mudziyo> Dzvanya pane yekugadzika cog kumusoro kumusoro kurudyi> Bhura pasi kuti uratidze> Chinja marongero maererano nezvaunoda.
Shandura maitiro emanheru
Chimiro chehusiku chinodzikisa huwandu hwemhinduro panguva dzakatarwa.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane yako Hub chishandiso> Tapira pazviruva cog kumusoro kurudyi> Night mode> Toggle on kana off.
Chinja izvo Nest Hub kana Nest Hub Max inoratidza kana isiri mukushandisa
Unogona kushandura zvinoratidzwa neHub yako kana isiri kushandiswa kudzora ako epamoyo zvigadzirwa, kukupa iwe netumapepa twemashoko kana kuridza vhidhiyo yeYouTube maitiro ekugadzira iwo mahombekombe akanakisa.
Unogona kusarudza pakati peGoogle Mapikicha, Art Gallery, Yakazara Screen Clock uye Yedza. Iwe unogona zvakare kusarudza kuvanda kana kuratidza mamiriro ekunze enzvimbo yako, kungave kana kuratidza nguva kana iri ambient mode uye kumhanya kunoita iyo mifananidzo inoshanduka kana iri ambient mode.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane yako Hub chishandiso> Dzvanya pane yekugadzika cog iri kumusoro kurudyi> Photo Frame> Sarudza zvaunofarira.
Chinja chimiro chewachi pakati pegumi nemaviri kusvika makumi maviri nemaviri-awa
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane yako Hub chishandiso> Tapira pane yekugadzika cog kumusoro kurudyi> Nguva Fomati.
Uchishandisa iyo Nest Hub touchscreen navigations
Swipe kubva kuruboshwe kuruboshwe kurudyi kuratidza wachi wachi. Tora kaviri chidzitiro chewindows kuti udzokere kuma ambient mode. Tora kaviri ratidziro zvakare kubva kuma ambient mode kuratidza kalendari, mamiriro ekunze, ruzivo rwenhau, kana chero chaunenge wakaisa kuti chioneke.
Swipe kumusoro kubva pasi kuti uwane kuratidza kupenya, vhoriyamu, maalarm uye magadziro. Iwe unogona zvakare kutendeuka usakanganise kubva pano.
Swipe pasi kubva kumusoro kwekuratidzira kuti uone uye kudzora ako akabatana smart zvishandiso kumba.
Kunge Google Imba, pane bhatani remaikorofoni kuseri kwechiratidziro cheNest Hub kumusoro. Ingo shandura kuti ubvise mamaikorofoni. Sezvo Nest Hub Max iinewo kamera, kushandura switch iyi kuchadzimawo kamera nemakrofoni.
Google Home Hub / Nest Hub wongororo
Google Nest Hub Max kuongorora
Google Home Mini uye Nest Mini chishandiso matipi uye matipi
Zvese zviri zviviri Google Google Mini neNest Mini zvine maikorofoni mbeve mbereko kumashure. Chinja kuti uchinje maikorofoni pane kana kudzima.
Iwe unogona zvirokwazvo kubvunza Google kuti ishandure vhoriyamu yeImba Mini yako kana Nest Mini kumusoro kana pasi, asi iwe unogona zvakare kuzviita pane iwo madhizaiwo. Tinya padivi rega (pazvinhu) zveNest Mini kana Imba Mini uye vhoriyamu yako inokwira kumusoro kana pasi zvichienderana nedivi raunobaya. Iwe unozotungamirwa nemwenje diki dze LED pane iyo Nest Mini, asi iwe uchafanirwa kufungidzira paImba Mini Mini.
Tamba kana kumbomira
Iyo Nest Mini inopa pane dhizaini yekutamba uye imbomira pamwe nehuwandu. Tinya magetsi mana ari mukati meNest Mini kana rwiyo ruchirira paNest Mini yako uye rwuchamira. Tinya zvakare kutamba.
Google Home Ishe mazai
Kutsvaga zvimwe zvinonakidza zvinhu zvekuita neGoogle Kumba zvishandiso? Aya ndiwo hunyanzvi Google Mubatsiri easter mazai, asi iwe uchaona vachinyatso kupa yako Google Kumba kifaa humwe hunhu:
Iti "Iva wangu (isa mutauro) muturikiri kuti uwane chaiyo-nguva shanduro.
Iti "Ndiri kunzwa rombo rakanaka" kutanga mutambo wevazhinji mitambo.
Iti "Ndipei nhamba isina kujairika pakati pa (x) na (y)" kuti unzwe nhamba isina kujairika pakati pezviviri - nemitinhimira inorira kuti ubhure.
Kumbira iyo ku "Roll (isa nhamba) -yakatsigira dice": Iyo inokupa iwe yakasarudzika nhamba, izere neinzwi mhedzisiro.
Iti "(Zita rekubata) ndiro rangu (hukama)" kukumbira Mubatsiri kuti ayananise humwe hukama hwehukama necontent kuitira ramangwana.
Iti "Mangwanani akanaka" kuti unzwe ruzha rwehurongwa hwezuva rako, pamwe nemamiriro ekunze uye nhau dzanhasi.
Iti "Tumira meseji kune (Bata zita) pa (kutumira mameseji seWhatsApp)" kuraira meseji kune waunosangana naye.
Iti "Wubba lubba dub dub" kuti Mubatsiri apindure ne: "Uri kurwadziwa here? Ndingabatsira sei? ” kana "Ndine urombo, handitauri Birdperson" (chirevo kuchiratidziro Rick naMorty).
Iti "Beatbox" kuti unzwe clip yemumwe munhu akarova-tsiva.
Iti "Imba rwiyo" kuti unzwe rwiyo runotyisa, mupfupi.
Iti "Verenga nhetembo" kuti unzwe nhetembo isina kujairika kubva kuGoogle kutsvaga.
Iti "Ndiudze joke" kuti unzwe joki rakakodzera zera kubva kuna Pstrong.
Iti "F *** iwe" kuti upe ripoti yeguru.